Joey Tee PDF zokuthunga Pattern – i Tailoress
ekhaya / Menswear / T-shirt / Joey Tee PDF zokuthunga Pattern
I Joey Tee isicelo elula kufanelekile t-shirt enokuthi isetyenziswe enemikhono emide okanye elifutshane. Ungenza kwakhona kube kunye okanye ngaphandle tot. Ifanelekile ijezi ilaphu.
I Joey Tee isicelo elula kufanelekile t-shirt enokuthi isetyenziswe enemikhono emide okanye elifutshane raglan. Ungenza kwakhona kube kunye okanye ngaphandle tot. Ifanelekile ijezi ilaphu.
Ifumaneka ubungakanani: S / M / L / XL
Sicela ubukele Joey tee Isifundo apha okanye ucofe iqhosha ngezantsi ukuvula kuyo kweli khasi.
tee: ubukhulu Copyshop: 72x 82cm / Pages A4: 12 / US Letter: 16
umkhono EMFUTSHANE: ubukhulu Copyshop: 44x 59cm / Pages A4: 6 / US Letter: 6
IMIKHONO EMIDE: ubukhulu Copyshop: 60x 85cm / Pages A4: 16 / US Letter: 12
Hood: ubukhulu Copyshop: 32x 44cm / Pages A4: 4 / US Letter: 4